Guddoomiyihii Kooxda Xidigaha Geeska Oo Ka Hadlay Xil Ka Qaadistiisa – HormoodNews
Guddoomiyihii Kooxda Xidigaha Geeska Oo Ka Hadlay Xil Ka Qaadistiisa
12/05/2017 7:39 pm by HormoodNews Views: 5
Hargaysa (HMN): Guddoomiyaha koox-faneedka Xidigaha Geeska oo ka dhisan magaaladda Hargaysa abwaan Xasan Saleebaan Dhuxul (laab-saalax), ayaa markii u horaysay ka hadlay warka la xidhiidha in laga qaaday xilka kooxdaasi.
Waxaanu tilmaamay in aanu wax dhibaato ah ka qabin qoraalka xubno ka tirsan kooxdaasi ku sheegeen in ay xilka ka qaadeen, isla markaana aanu arrinkaasi waxba ka qabin balse uu weli xubin ka sii ahaan doono kooxda xidigaha Geeska.
Isagoo arrintaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi “Ma jiraan wax dhibaatooyin ama khilaaf ah oo ka dhex jira kooxda xidigaha Geeska. Kooxda xidigaha Geesku mudadda 6 sanadood ah ee ay jirtay, marka laga reebo 8 bilood guddoomiye ayaan ka ahaa.
Laba todobaad ka hor ayaan saaxiibadayda xidigaha Geeska si shaqsi shaqsi ah iyo koox ahaanba aan ugu sheegay in aanan guddoomiye ka sii ahaanaynin kooxda, hawlahayga gaark ah darteed”.
waxa kaloo uu intaa ku daray Xasan Dhuxul, in haddii laga qaaday xilka guddoomiyenimo ee kooxda aanu waayin xubin-nimadii kooxda, isla markaana uu ka sii tirsanaan doono. “Waan ku faraxsanahay ninkii xilka qabta, waayo ragg iga karti badan ayaa jooga.
Xidigaha Geesku-na waa dhalinyarro hibadu midaysay, weligood-na way sii jirayaan, aniguna haddii aan xilka ka tegay kamaan tegin in aan xubin ka sii ahaado kooxda” ayuu yidhi Xasan Dhuxul.
Dhinaca kale qoraalkii ay laba maalmood ka hor soo saareen kooxda xidigaha Geeska ee ay xilka kaga qaadeen Laab-saalax, waxay kaga ahdleen sababaha ay xilka uga qaadeen kuwaasoo ay ka mid ahayd in ay ku eedeeyeen musuq maasuq, xil gudasho la’aan iyo waxyaabo kale.
Balse abwaan Laab-saalax, ayaa xil gudasho la’aanta lagu eedeeyay ku tilmaamay mid aanay waxba ka jirin. Waxaanu yidhi “Xil gudasho la’aanta ay sheegeen saaxiibaday, haddii ay noqotay in aan danahayga gaarka ah kaga mashquulay, taas waxay ula jeedaan anigu ma garan karro”.